Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo gaaray Baydhabo – Bandhiga
Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo gaaray Baydhabo
Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow gaarey magaalada Baydhabo ee xarunta Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed.
Booqashada Ra’iisul Wasaaraha ee Baydhabo oo ahayd mid aan horay loo sii shaacin, waxay ujeedadeedu tahay ka qayb galka aaska Marxuumad Maamo Haajaro Cali Aadan oo ahayd hooyada Guddoomiyaha Aqalka Hoose ee Baarlammaanka Soomaaliya, taas oo shalay isla magaalada Baydhabo ku geeriyootey.
Ra’iisul Wasaaraha waxaa socdaalkan ku weheliya mas’uuliyiin ka tirsan Golaha Wasiirrada oo ay kamid yihiin Wasiirka Qorsheynta, Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiir Ku Xigeenka Warfaafinta iyo xildhibaanno ka kala tirsan labada aqal ee Baarlammaanka Soomaaliya.
Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed oo Madaxweyne Shariif Xasan hoggaaminayey ayaa wafdiga Ra’iisul Wasaaraha kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Baydhabo, waxaana intaas kaddib loo sii gudbiyey xabaalaha uu aasku ka dhici doono.
Aaska kaddib Ra’iisul Wasaaraha ayaa la filayaa in uu muddo saacado ah Baydhabo kusii negaado, isaga oo kulammo la qaadan doona madaxda Maamulka Koonfur Galbeed iyo qaar kamid ah madaxda dhaqanka ee Baydhabo.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa la adkeeyay iyadoo aaska hooyada guddoomiyaha baarlamaanka ay ka qeybgaleen madax faro badan.
Safarka ra’iisul wasaare Kheyre ayaa ku soo beegantay xilli ay madaxda dowlad goboleedyada ay isu diyaarinayaan kulan ugaga furma magaalada Kismaayo.